Kufamba Simba Wiricheya
Kana iwe zvikaitika kuti uri kutambura nekuganhurirwa kufamba, ivo wiricheya yemagetsi inogona kunge iri mhinduro yedambudziko rako. Unogona kufamba famba uri wega nemasimba ekudzora pamunwe wako. Simba wiricheya yakasarudzika sarudzo kune avo vane hupenyu hwakabatikana uye vanofamba kazhinji.
Aya machair ekupeta anogona kukatanurwa nekukurumidza uye kuchengetwa mutangi remotokari. Pane zvakawanda zvakasarudzika sarudzo uye maficha pane akasarudzika iwo uye ivo vanogona kukumisikidza kumashure zvakanyanya seUS $ 30,000.
The foldable manual wheelchair ndeimwe yesarudzo dzakareruka pamusika uye inogona kupetwa kusvika kune yakaenzana saizi. Asi kwete vese vane kuremara ine simba repamusoro rekusundidzira a wiricheya yemawoko uye yemagetsi ingava sarudzo iri nani.
Izvi zvinowanzorema asi zviripo mavhiripu iyo inogona kuparadzaniswa uye kuchengetwa mutrunk yemotokari kana mundege. Iwo anobviswa kubva kune yemagetsi mota uye anogona kupetwa. Iyo mota inogona kutakurwa yakaparadzana kubva kune mamwe ese wiricheya.
Simba rinorema mavhiripu huremu hunosvika makumi masere emakumi matanhatu kana uchinge wapatsanurwa nepo iwo akareruka achirema anenge 80 lbs. Kufamba mavhiripu hadzina kugadzirirwa kune avo vane hombe miviri miviri asi aripo basa rinorema mavhiripu izvo zvakagadzirirwa avo vane mafuremu makuru emuviri. Zvimwe zvigaro zvekufambisa zvinogona kutakura zvinosvika mazana matatu emapaunzi.
Mitemo Yekufamba Pane Ndege Nesimba wiricheya
Pane mimwe mirau nemirau yaunoda kuti uzive kana uri kufamba nendege nesimba rako wiricheya. Nhanho yako yekutanga ingave yekubata yendege rubatsiro tafura uye uvazivise kuti uri kufamba nesimba wiricheya. Nenzira iyoyo ivo vanozove vachiziva nezvekuuya kwako uye vanogona kukubatsira iwe kuti utarise muchigaro chako chemagetsi.
Paunenge iwe wasvika kwaunoenda kwekupedzisira kwaunogona kuvakumbira kuti vatore yako wiricheya. Seyambiro yekuchengetedza, gara uine bhatiri rakaringana kana chaja inokodzera kana uchifamba kwenguva yakareba kuti usazopera simba.